PressReader - Isolezwe: 2017-11-14 - Ingahle ifane neyokugcina icala imidlalo kaGroup D
Ingahle ifane neyokugcina icala imidlalo kaGroup D
Isolezwe - 2017-11-14 - ISOLEDISKI - LUNGILE MAJOKA
UMA kuwukuthi akukho okuhlukile okuzonqunywa yinkantolo yezemidlalo ngesinqumo senhlangano eyengamele ibhola emhlabeni iFifa, sokuphinda umdlalo weBafana neSenegal obungempelasonto, kusho ukuthi imidlalo yanamuhla kaGroup D yamaqembu ase-Afrika yokuhlungela iNdebe yoMhlaba izobe sekungeyokugcina icala.
I-Court of Arbitration For Sport (CAS) ayikacacisi ngesinqumo esithathile ngemuva kokuthi iBurkina Faso yafaka isimangalo ngesinqumo seFifa. Yize kwabikwa ukuthi iCAS isamukele isimangalo seBurkina Faso kodwa ohlwini lwamacala angoNovemba nangoDisemba aluveli usuku okuzolalelwa ngalo.
Ngempelasonto iSenegal izenzele walula umsebenzi obheke kwiNdebe yoMhlaba ihlula iBafana ngo 2-0 kulo mdlalo obuyimpinda. Umphumela uyibeke emaphuzwini angu-11, okusho ukuthi alikho iqembu elingayifica kuGroup D.
IBurkina Faso ilele endaweni yesibili ngamaphuzu ayisithupha alinganayo naweCape Verde edlala nayo namuhla. Uma kukhona onqobayo uzogcina emaphuzwini ayisishiyagalolunye.
Ngemuva kokuthi iSenegal ithele phansi iNingizimu Afrika ithumele emuva isilomo sayo uSadio Mane eqenjini lakhe eLiverpool kwazise ubusuphelile umsebenzi. Namuhla la mazwe azotholana eStade Leopold Senghor, eDakar. Umdlalo uzoqala ngo-9.30 ebusuku ngokwesikhathi sakuleli. NoweBurkina Faso uzobe ungesikhathi esifanayo.
Yize kwabaningi eNingizimu Afrika lo mdlalo usufana nento engathi shu, umqeqeshi weBafana uStuart Baxter, ushiye umyalezo wokuthi eqenjini lesizwe awukho umdlalo ongabalulekile.
“Siya emdlalweni wangoLwesibili ngenhloso yokuwina,” kusho uBaxter othembise ukuzibeka phansi izintambo uma ehluleka nawukufaka iqembu kwi-Africa Cup of Nations yango-2019.
Kwamanye amaqoqo ayikho le nzukazikeyi ekuGroup D. INigeria iyona ehambe phambili yaba yiqembu lokuqala ukuzibekisela indawo eRussia iqwaqwada kwasani kuGroup B.
AmaSuper Eagles abuyele kwiNdebe yoMhlaba okwesibili kulandelana njengoba ayekhona eBrazil ngo-2014.
U-Group A uthathwe yiTunisia yona eyayigcine ukuya kweyoMhlaba eGermany ngo-2006.
I-Morocco ishaye i-Ivory Coast ngo 2-0 kuGroup C ngempelasonto yathola ithikithi layo ngemuva kokugcina ukuba kulo mqhudelwano ngo-1998 eFrance.
KuGroup E kukhonye i-Egypt abuyela estejini somhlaba ngemuva kweminyaka engu-27 njengoba yayigcine e-Italy ngo-1990.
Amazwe azodlala eRussia asezolinda ukuqhathwa emcimbini ngoDisemba 1, eState Kremlin Palace, eMoscow.